8 dabeecad waa in aad hadda joojiso – waa xaqiiqo | Wardeeq 24 TV
Home Arrimaha Bulshada 8 dabeecad waa in aad hadda joojiso – waa xaqiiqo
8 dabeecad waa in aad hadda joojiso – waa xaqiiqo
Adiga oo dhan waxaa ku soo koobaya sida ay dabeecaddaada tahay. Marka ay dabeecada xun ay noloshaada la wareegaan, waxay hor is taagayaan hormarkaaga.
Caqabadda waxay tahay in dabeecadda xun ay qarsoon tahay, si tartiib ahna ay ula wareegeyso noloshaada. Waxaadna ogaaneysaa marka ay dhibaato kuu geysato.
“Silsiladaha dabeecadaha way fudud yihiin lamana fahmo illaa ay culeys noqdaan, ka dibna ay dhulka kugu dhuftaan”. – Warren Buffett
In aad ka guuleysato dabeecadaha xun waxaa aasaas u ah in aad naftaada ka warhayso. Cilmi-baaris ayaa muujineysa in xakameynta nafta ay aad u qiimo badan tahay, ayna tahay waddada guusha nolosha.
Xakameynta nafta waxay u baahan tahay in aad la timaado dabeecado wanaagsan – waana adeegga anshax wanaagsan iyo wax soo saarka. In aad xakameynta naftaada barato waxay u baahan tahay in aad si wanaagsan ugu tababarato.
Dabeecadaha arrintaa hor istaagaya, aadna u baahan tahay in hadda aad joojiso waxaa ka mid ah:
In mobile-ka, tablet ama computer aad ku dul isticmaasho sariirta:
Tani waa arrin wayn oo dadka badankooda aysan ogeyn dhibaatada ay u geysaneyso maskaxdooda iyo indhahooda. Iftiinka buluugga ah eek a soo baxaya qalabka casriga ah, wuxuu door wayn ku yeeshaa shucuurtaada, awooddaada iyo tayada hurdadaada.
Subixii, iftiinka qoraxda waxaa aad uga buuxa shucaaca ifka buluugga ah. Marka aad indhaaha ugu eegto si toos ah, wuxuu saameynayaa hoormoornnada hurdada, wuxuuna kaa dhigayaa si aad u feejigan oo soo jeeda.
Balse galabkii, fallaahaas buluugga ah way ka baxaan iftiinka qoraxda, jirkaagana wuxuu billaabayaa in uu isu diyaariyo hurdo.
Haddaba, wixii ka dambeeyay maqribka, indhahaaga ma filayaan iftiinka buluugga ah. Haddii aad telefoon ama laptop isticmaasho, waxay u daran tahay maskaxda iyo indhaha, waxayna dhibato ku noqoneysaa sida jirkaaga u nasanayo.
Iftiinka qalabka casriga ah wuxuu bedelayaa qaabka maskaxdaada ay isugu diyaarisay hurdada – xitaa haddii aad hurudana, subixii waxaad soo tooseysaa adigoo daallan oo jirka oo dhan uu ku xanuunayo, sababtoo ah maskaxdaada ma aysan nasanin.
Waxa ugu wanaagsan waa in aad joojiso dabeecadda isticmaalka telefoonka, adigoo sariirta ku jiifa. Telefishinka laguma daro, maadaama aad ka fogtahay oo fallaaraha iftiinkiisa aysan toos ugu dheceynin indhahaaga.
Xamaasadda dhex-mushaaxa internet-ka
Qiyaastii 15 daqiiqo ayey kugu qaadaneysaa in aad dhex wareegto internet-ka ka hor inta aadan helin wax rasmi ah oo aad kuu soo jiita – waa dabeecad caadi ah, markasta oo aad gasho aaladaha internet-ka.
Marka taas ay dhacdo, waxaad dhexgaleysaa xaalad farxadeed oo saa’id ah, waxaana sare u kacaya wax soo saarkaaga iyo shaqada maskaxdaadad.
Cilmi-baaris ayaa muujisay in dadka ku dhex jira shucuurta sabeynta iyo farxadda ay shan jibbaar ka wax soo saar badan yihiin kuwa caadiga ah.
Balse, waxaad marxaladdaa ka bexeysaa marka aad isku deydo in aad eegto Facebook, wararka, ama ciyaaraha iyo waxyaabaha la midka ah, waxaad isla markiiba lumineysaa farxaddii iyo sabeyntii.
Taas micneheedu wuxuu yahay in haddana aad u baahan tahay 15 daqiiqo oo kale, si aad ula qabsato halkii ay howsha kuu mareysay iyo marxaladdii wax soo saarka. Haddaba, dhibaatada baraha bulshada waa mid xun oo saameyn leh, waana in aad iska ilaaliso.
In aad telefoonkaaga isticmaasho adigoo qof kale uu kuu sheekeynayo
Waa mid ka mid ah dabeecadaha ugu xun ee xushmad darrada ku ah qofka kula hadlaya! Ma jirto sabab aad u eegto farriin ama xitaa wicitaan aan mararka qaar muhiim ahayn, aadna uga sii jeesato qof ku hor taagan oo kuu sheekeynaya.
Dabeecadda iyo dhaqanka wanaagsan waa in aad awooddaada, maskaxdaada iyo dareenkaagaba siiso sheekada qofka kula hadlaya – marka ay dhammaatana aad eegto farriimaha telefoonkaaga.
In aad furato qeybo badan oo farriimo kala duwan ay kaaga soo dhacayaan
In uu telefoonkaaga soo dhawaaqo markasta oo farriin ay kuu soo dhacdo – Facebook, Twitter, Instagram, TikTok, Email, WhatsApp iyo kuwa kale oo badan – waxay dhaawac weyn u geysaneysaa qaab fikirka maskaxdada, sida cilmi-baaris lagu ogaaday.
Sida ugu wanaagsan waa in aad noloshaada iska wadato, aadna xilliyo u sameyso eegidda farriimaha kala duwan ee kuu soo dhacaya – haddii aadan sidaa sameynin, waxay kugu noqonayaa carqalad wayn oo saameeya shaqadaada.
In aad “HAA” dhahdo xilligii aad “MAYA” dhihi lahayd
Cilmi baaris ay sameysany Jaamacadda California ee San Francisco ayaa muujineysa in markasta oo ay kugu adkaato in aad dhahdo maya, in aad noloshaada sii gelineyso ciriiri iyo walwal.
Waxa ugu way nee aad u baahan tahay waa xakameynta naftaada. “MAYA” waa erey xoog badan, waana in aadan ka baqin in ad adeegsato ereyga.
Dadka caqliga badan marka aysan dooneyn in arrin ay sameeyaan, way iska ilaaliyaan adeegsiga ereyada “uma maleynayo in aan sameyn karo” ama “ma hubo”.
Marka ay joogto xaaladdii “MAYA” aad dhihi lahayd in shaqo cusub loguu diro, waxay sharaf wayn u noqoneysaa howsha kale ee aad markaa hayso, waana fursad aad guul kaga gaari karto shaqada aan markaa ku dhex jirto.
In aad “MAYA” dhahdo oo aad diido wixii aadan dooneynin waa qaabka ugu wanaagsan ee xakameynta naftaada, waxayna ka hor tageysaa in saameyn xun ay kugu yeelato shaqo kale oo aadan qaban Karin, ama wakhti aadan u haynin.
Is weydii waxa ay yihiin dadka dhaqanka iyo dabeecadda xun ee sunta ah
Markasta waxaa jiro dad sun ah oo fursad u helaya in noloshaada ay dhexgalaan ayna ku dhex noolaadaan. Waxay noqon karaan, qof kula shaqeeya oo aad u dhaqan xun; ama qof jecel in uu kaa xanaajiyo markasta, haddana saaxiib isaga kaa dhigo.
Haddaba, ku dadaal in aad la saaxiibto kuwa noloshaada wax ku soo kordhin kara ee faa’iidada leh. Waxaa jiro kuwa badan oo mudan in lala saaxiibo.
Dadka xanta badan waxay jecel yihiin dhibaatada dadka kale. Waxay madadallo ka dhigtaan nasiib darada iyo caqabadda qof kale haysata – ha ahaato shaqo, xirfad ama xitaa arrin qoys.
Balse, muddo ka dib, waxay ku noqotaa murugo, jahwareer, waxayna dhaawac u geysataa quluubtooda.
Waxaa jiiro arrimo badan oo wanaagsan iyo dad badan oo xiiso leh oo aad wakhti wanaagsan la qaadan karto, la sheekeysan karto. Dadka wanaagsan ka barro arrimaha la xiriira dhibaatada xanta iyo xitaa dhibaatada shaqsiyadeed.
“dadka caqliga badan waxay is dhaafsadaan fikrado wanaagsan, dadka iska caadiga ah waxay ka hadlaan dhacdooyiin, dadka caqliga yarna dadka ayey ka sheekeystaan oo ay xantaan.”
In aad isla barbardhigto dadka kale
Marka farxaddaada iyo noloshaada ay ku xiran yihiin in aad xilli kasta isla barbardhigto dadka kale, haddaba markaas waxaa ku sugan tahay xaalad ah in adiga aadan maamulin noloshaada iyo farxaddaada.
Marka aad wax wanaagsan sameyso oo aad ku faraxdo, ha ogolaanin in qof kale aragtidiisa ama in uu farxaddaa kaa qaato. In kastoo ay adag tahay in la joojiyo fikradaha kaa guuxaya ee raadinta aragtida dadka kale, haddana naftaada ha barbardhigin nafta qof kale.
Walwal yaysan kugu noqonin waxa dadka kale ay kaa aaminsan yihiin iyo sida ay kuu arkaan, adiga qiimeyn u yeel naftaada – waana in adiga aad is hsrafto marka hore.
In aad naftaada u tababarto in ay ka feejignaato dabeecadaha xun waa awood dheeraad ah oo aad gaareyso. Waa in aad isu diyaariso sidii dhaqamada aan fiicneyn iyo dabeecadaha xun aan isaga deyn lahayd, ugana fikiri lahayd kuwa wanaagsan ee hormarka aad ku gaareyso.
Previous articleNatiijooyinka Hordhaca Ah Ee Degmooyinka Qaar Ee Somaliland Oo La Shaaciyay
Next article10 qof oo lagu dilay dagaal ka dhacay waddanka Masar